ဖလော်ရီဒါမှာ Data Recovery ကိုန်ဆောင်မှုများ | LC နည်းပညာ | Data Recovery
ဖလော်ရီဒါမှာ Data Recovery ကိုန်ဆောင်မှုများ
နေအိမ် → ဖလော်ရီဒါမှာ Data Recovery ကိုန်ဆောင်မှုများ
LC နည်းပညာဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအမျိုးအစားအားလုံးကိုအဘို့ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်, ပေါင်း hard drive ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဦးအဖြစ်’ အကြီးဆုံး flash မှတ်ဉာဏ်ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်, LC နည်းပညာအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအနေဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှလူတိုင်းအတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖလော်ရီဒါဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုများဒေတာကိုမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်. သငျသညျမတော်တဆဒေတာဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ဖူး, ပုံရိပ်တွေ, သင့်မီဒီယာကနေဗီဒီယိုတွေကိုသို့မဟုတ်အသံဖိုငျမြား, တစ်ရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာချပ်ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာဆွဲထုတ်? ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုသင်၏ဖိုင်များကို recover ပြန်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုရနိုင်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖလော်ရီဒါဒေတာဆယ်တင်ရေးန်ဆောင်မှုဓာတ်ခွဲခန်းများအားလုံးဖောက်သည်ဒေတာနှင့်အတူလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်မှာပုဂ္ဂလိကထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း. ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း access ကိုသာသင့်လျော်သောအထူးကုထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ဆိုလိုတယ်. ကျနော်တို့မှန်မှန်အစိုးရလျှို့ဝှက်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကန်ထရိုက်နေကြတယ်, ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ. LC နည်းပညာပစ္စည်းများလိုအပ်ခွဲခြားကြောင်းလုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆင့်အထိနေသားတကျဖြစ်ပါသည်. အားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စာရွက်စာတမ်းများအပြီးအပိုင်ပြီးနောက်သုတ်နေကြ 30 ရက်ပေါင်း.